Khin Maung Chin: ခါးသီးသောအရှုံး
27 May 2011 7:04 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
သံသယတွေဝင်လာပြီး ''ငါ့ဘဝမှာအနိုင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလား?ငါဒီလိုအမြဲတမ်းရှုံးနေရတော့မှာလား?'' စတဲ့မရေရာတဲ့အတွေးတွေ၊သံသယတွေဝင်လာပြီး
အနေနဲ့အရွယ်ရောက်ကာစသမီးပျိုအပေါ်မှာဘယ်လောက်မျှော်လင့်ထားတယ်၊ ဘယ်လိုအားကိုးခဲ့လည်းဆိုတာတွေကို (ဤနေရာတွင်သားသမီး၏လုပ်စာ၊ထောက်ပံ့ငွေကိုမဆိုလိုပါ၊ မိဘတွေ၏သားသမီးတွေအပေါ်ဆင်စီးပြီးမြင်းရံစေချင်သောမျှော်လင့်အားကိုးမှု့ကိုဆိုလိုပါ၏) ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ..။
အမှတ်မထင်အဲဒီအကြောင်းတွေပြောဆိုဖြစ်ကြတယ်ဆိုပေမယ့်ကျနော်တို့စကားပြောခဲ့တဲ့ အချိန်သုံးပုံပုံလိုက်ရင် နှစ်ပုံကအဲဒီအကြောင်းတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မှာပါ.။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့လည်း(အသက်သာဆယ်နှစ်လောက်ကွာပေမယ့်ရွယ်တူကဲ့သို့)
မိဘတစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာကိုလေးစားလို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ.. ပြောချင်တာကစီးပွားရေးအရအဆင်ပြေနေတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုရေးရာမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အရှုံးတရားအကြောင်းပါ..။
ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။အဲလိုသိဖို့ဆိုတာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်စရာမလိုဘူးဆိုတာ သူငယ်ချင်းတို့လည်းနားလည်မှာပါ။ချွင်းချက်အနေနဲ့ ကျနော်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုမဟုတ်ပဲသားသမီးတွေအပေါ်မှာနိုင်လိုမင်းထက်ပြု၊သူတို့စီမံချင်တဲ့အတိုင်း
သူတို့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးအတ္တကြီးတဲ့မိဘတစ်ချို့လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်. ။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အတွေ့အကြုံ၊
လေ့လာထားမိသလောက်ဆိုရင်တော့အဲလိုမိဘတွေဟာရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် တော်တော့်ကိုနည်းပါးလှပြီး၊ မရှိသလောက်ပဲလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ..အဲဒီမိဘတွေအကြောင်းကိုနောက်တော့မှပို့စ်တစ်ပုဒ်အဖြစ်ရေးပါ့မယ်။
ခုတော့ကျနော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ''အရှုံး'' ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲသူငယ်ချင်းတို့ကိုပြောပြပါရစေ..။
အများရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။အချိန်တော်တော်များများကျနော်နဲ့မခွဲမခွါရှိနေခဲ့တဲ့သူဟာဘယ်သူလဲလို့ တစ်ယောက်ယောက်ကမေးလာခဲ့ရင် အရှုံး ပါပဲလို့ကျနော်ဖြေရမှာပါ..။အဲဒီလောက်ထိအောင်ကျနော့်ဘဝမှာအရှုံးဆိုတာတွေကိုတွေ့ခဲ့၊ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်..။
ဘလော့ဂါကိုဇော်ရေးတဲ့ စပ်မိစပ်ရာဘာညာကွိကွ ၃ ဆိုတဲ့ပို့စ်ထဲကလိုကုလားမစည်းနင်းခဲ့ဖူးတဲ့
ကလေးဘဝမှာလည်းထိပ်ဆုံးကွက်ကိုရောက်ပြီးကာမှနောက်ပြန်စမ်းပြီးကိုယ့်ဒိုးကို ကိုယ်ပြန်ကောက်တဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကြောင်းကိုထိမိလို့ရှုံးခဲ့ရ၊ စည်းကြောင်းကိုမထိမိပေမယ့်လည်းနောက်ပြန်ပစ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာ
တွေအပေါ်ကိုပြန်ကျလိုက်၊ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပထမကံကောင်းထောက်မစွာတည်ဆောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကိုယ်အိမ်လေးပေါ်ကျသွားလို့ အိမ်ကလေးမီး
ကျနော့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဆယ်တန်းထိပဲကျောင်းနေခဲ့ရပါတယ်..။ ရွယ်တူသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးတက္ကသိုလ်တွေရောက်၊ နောက်နည်းနည်း
အရှုံးဆိုတာကိုကျနော်နည်းနည်းလေး သတိထားမိလာတာပေါ့ဗျာ.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့
(အကျိုးဆက်အနေနဲ့တော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းရှားပါးကုန်တော့တာပါပဲ:P..Online မှာရောOutline မှာပါ.။နောက်ပြီးဘလော့မှာလည်း''သူကတော့ဖြင့်ကျနော့်သူငယ်ချင်းပါလို့'' အားရပါးရလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတဲ့မိတ်ဆွေမရှိသေးပါဘူးဗျာ..
မမJasmine(တောင်ကြီး) တော့ခင်မင်ရှာပါရဲ့)..10Q မမ.
အရှုံးသမားတွေကိုအမြဲမြင်နေရတုန်းပဲလေ..။စကားလုံးအရသာတိုတောင်းတာပါ (အရှုံး) တဲ့..။ ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှု့အနေနဲ့ကတော့သွားမစမ်းနဲ့သူငယ်ချင်းရေ..
ပြန်ထဖို့အားတောင်မနည်းပြန်ယူရတယ်ဗျ.. ဒါတောင်မိတ်ဆွေ၊ဆွေမျိုး၊အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ငွေကြေး အစစအရာရာတောင့်မှ၊ ကောင်းမှပြန်ထလို့ရတာကများတယ်လေ.. မဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာ..။ အရမ်းကိုအင်အားကြီးမားတယ်၊မမြင်နိုင်တဲ့၊လူကိုဆုတ်ယုတ်သွားစေနိုင်တဲ့အင်အားတွေ အဲဒီ '' အရှုံး ''
ဆိုတဲ့ကောင်ထဲမှာရှိနေတယ်..။ တချို့ကတော့ကလေးဘဝကအရှုံး၊ တချို့ကတော့လူကြီးဘဝရောက်မှရှုံးတဲ့အရှုံး၊ တချို့ကတော့အချစ်ရှုံး၊ ကုန်ရှုံး၊ အရင်းရှုံး၊ အမှု့ရှုံး
အများကြီးပေါ့ဗျာ....... ဘယ်အရှုံးကိုမှလျှော့မတွက်မိစေနဲ့သူငယ်ချင်း..။အားလုံးက Powerful တွေချည်းပဲ...ဟဲဟဲ..။ဒီလိုပြောနေလို့အဲဒီအရှုံးဆိုတဲ့ကောင်ကိုကြောက်
မသွားနဲ့ဥိးနော်..။ကြောက်သွားအောင်ရေးပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ စိတ်ဓတ်မြှင့်တင်နိုင်အောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကျနော့်အမြင်လေးကိုရေးပြနေတာပါ.။ ကျနော်တို့နေနေတာက
တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်တော့ကျနော်ပြောနေတဲ့အရှုံးဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်မိကြရမှာပဲလေ..။ ဒီလိုရင်ဆိုင်မိတဲ့အခါကြတော့ကျနော်တို့အားလုံးကိုအလဲထိုးတိုက်ခိုက်မယ့်အရှုံးဆိုတဲ့ ကောင်ကိုဆိုးဝါးတယ်၊
ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ညီးတွားနေရုံနဲ့တော့အဲဒီကောင်က ကျနော်တို့ကိုချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်အလစ်အငိုက်ဖမ်းပြီးကျနော်တို့ကိုနှောက်ယှက်နေဥိးမှာပါ..။ ဒီတော့ဗျာ..တစ်ခုလုပ်ကြရအောင်...ရှု့ထောင့်မျိုးစုံကနေဝင်လာနိုင်တဲ့အရှုံးဆိုတာကြီးကို အနိုင်ဆိုတာကြီးနဲ့ပြောင်းပစ်ကြရအောင်..။တကယ်တော့အရှုံး
ကျနော်တို့မြင်တတ်လာပြီဆိုရင်တော့၊အသုံးချတတ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျနော်ပြောရဲပါတယ်.. အဲဒီလူရဲ့ဘဝမှာအရှုံးဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ.။ ဒါပါပဲ..
ဘဝဆိုတဲ့လမ်းပေါ်မှာလျှောက်နေကြပြီဆိုရင်တော့မှားကြလိမ့်မယ်၊ရှုံးကြလိမ့်မယ်. အဲဒီအမှားတွေ၊အရှုံးတွေထဲက ကိုယ်မြင်သလောက်၊ရနိုင်သလောက်သင်ခန်းစာတွေကို
သာကိုယ်ယူထားပြီးနောင်ကိုသတိထားမယ်၊ဂရုပြုနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်...ခုနကပြောသလို အရှုံးဆိုတာကြီးကို အနိုင်နဲ့ပြောင်းလို့ရပြီပေါ့ဗျာ...
ကျနော်ဥာဏ်မှီသလောက်စဉ်းစားပြီးရေးသားထားတာမို့မပြည့်စုံတာတွေရှိနေမှာပါ... သူငယ်ချင်းတို့အမြင်နဲ့လုံးလုံးကြီးဆန့်ကျင်ကောင်းဆန့်ကျင်နေနိုင်ပါတယ်... ဒီလိုဆန့်ကျင်တာကိုပြသနာတစ်ရပ်လို့မမြင်ကြပဲကျနော့်ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်တဲ့ အရှုံးကိုအနိုင်နဲ့ပြောင်းပစ်ရေး ကိုပဲကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကကိုယ်ပြောင်းပစ်ကြပါစို့လို့ လေးစားစွာပြောလိုပါတယ်..။
(အမှန်တော့အရှုံးဆိုတာတကယ်ကြုံရတဲ့အရှုံးသမားသာ အဲဒီအရသာကိုခါးခါးသီးသီးခံစားရတာမို့ စာနာမိတဲ့အနေနဲ့ကျနော့်အမြင်လေးကိုရိုးသားစွာတင်ပြလိုက်ရတာပါ)
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ရေးမိရေးရာလေးပါ3ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
May 27, 2011, 8:06:00 PM
May 28, 2011, 12:04:00 AM
ဝါး . .ချရေးလိုက်တော့လည်း အရှုံးတွေက မနည်းပါလား။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုတွေးနေလို့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူးလေ။ အရင်ကတော့ ကျနော်က ဒီလို ရေးဖူးသေးတယ်။
May 28, 2011, 11:52:00 AM
@Jasmine(တောင်ကြီး)မမရေ.. ခုလိုအားဆေးတစ်ခွက်လာတိုက်တာကျေးဇူးပါ။ @ကိုဇော်.ကျနော်လည်းခုဒီလိုအားယုတ်စရာအတွေးတွေမတွေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခုတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဘဝခရီးကို လျှောက်နေတယ်ဗျို့.. လုပ်စရာတွေကရှိသေးတယ်မဟုတ်လား.:-) ကျေးဇူးပဲကိုဇော်.......